Fiara nisy nandoro, Haintrano tsy nahy… | GAZETY_ADALADALA
Fiara nisy nandoro, Haintrano tsy nahy…
Posted on 16/11/2010 by gazetyavylavitra
Tokony ho tamin’ny 6 ora hariva tany ho any ny andron’ny 16 Novambra 2010 dia hatairana ny an’ny rehetra raha nahta fiara mpitatitra lasibatry ny afo (taxibe 139) tetsy Ambatomitsangana ambony, akaikin’ny tohotohobato midina mankao amin’ny toeram-pianarana « La colombe »
Raha ny filazan’ny mpanampy ny mpamily dia toa hetraketraky ny olona iray niala avy tao anaty fiara sy nanao izay hialàna haingana ny toerana no antony, satria tsy ela taorian’izay dia nirehitra ny fiara. Soa fa tsy nisy ny aina nafoy. Simba tanteraka tsy nisy azo natao ahoana kosa anefa ny fiara. Tonga teny an-toerana ny mpamono afo sy ny mpitandro filaminana nifehy ny olona sy nanao ny asany.
Fa raha mbola teo an-toerana naka sary sy nanangona vaovao ny tena no nisy olona sendra nandalo no sady miresaka amin’ny finday reko tampoka miteny mora manao hoe
« izaho izao vao avy nandalo tery ambony tetezana fa misy zavatra midonaka be ao akaikin’ny Look’s ao, nefa eto koa aty ato misy minibus mirehitra »
Tsy naharitra aho fa tonga dia nisakana ilay olona no sady nanontany azy tsara hoe :
« aiza hoe ramose no misy inona koa? »
Ary dia natorony ahy ny toerana.
Marihana fa tafaraka tamiko teny ankianja i Andrydago , Ariniaina, ary Candy tamin’io fotoana io ary nifampizarana haingana ny vaovao. Tonga dia nitodi-doha nidina namonjy ny tao amin’i Look’s daholo indray ny liam-baovao rehetra.
Afobe mijoalajoala nandevona ireo trano hazo tao ambadik’ilay toeram-pivarotana Moto eo akaikin’ny OTIV no niandry ny rehetra tao. Tokantrano valo eo raha kely no rava fanànana. Isan’izay lanin’ny afo sy tsy nisy azo natao ny foiben’ny AKFM etsy Andravaohangy ambony, satria dia tafakisaka hatrany ny afo, raha taty ambany no niainga.
Kila hotohoto ny foibe AKFM
Ankizivavy kely iray nitomany teo akaikiko teo no nanontaniako ny amin’ny antony nahatonga ny afo (ao anatin’ny tanàna mirehitra izahay amin’io) . Sady mitomany izy no nitantara ny tahony ny mpampianatra azy fa hoe bedin’ilay mpampianatra azy hono izao izy fa tavela ao daholo ny fitaovany rehetra, may ao koa ny sora-piankohonany, sns … Rehefa nampanginina sy nilazàna izy fa tsy misy bedy izany fa hita sy zakain’ny maro ny fahamaizana mitranga, dia nanomboka nitantara ny niandohan’ny afo.
« Nisy nanao zavatra tao afovoany tao, tsy haiko na nandoro taratasin-kabone, na avy amin’ilay fatapera, fa niparitaka ilay afo. Avy ao amin’ilay mpivarotra pate jaune » – Cathy
Ankizy iray hafa no nitantara fa nahita koa ny fiparitahan’ny afo saingy efa nahazo vahana vao tsinjony
« Saika hamono ilay afo ihany aho fa tsy navelan’i Zeze. Avelao fa tsy matin’ialahy intsony io hoy izy. Dia nandositra nanavotra aina sisa no nataonay »
Fa ny tena nanahirana ahy tamin’ity haintrano ity dia satria misy fianakaviana sahirana, anisan’ireo karakarainay mivady miaraka amin’ireo mpifanohana aminay (TetezanaOnlus) tao. Ny fianakavian’i Njaka kely. Tsy mbola tao an-tokantraony izy ireo tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza. May tao daholo ny fitaovana nomena ny ankizy mba handratoana fianarana, ny fitafy, ny fanaka kely mba azy ireo. Ny teny an-kodiny sisa no tavela sy hany fananany.
sary nalaina ny ampitson'ny loza. Teto no nisy ny tranon'i Njaka kely ny ny ankohonany
Ary na teo aza izay nanahirana izay dia ity no tena nampahonena sy tsy nampandry ny saiko mandra-pahitako ny marina. Tsy niala teny an-toerana mihitsy aho raha tsy afa-nenina sy nahita vokatra: misy mpiambina io foiben’ny AKFM io, Ra-dadafara no fahalalan’ny maro azy, manana zafikely 7 taona miara-monina aminy izy. Rehefa nahita ny afo io zazalahy kely io dia nihanika andrin-jiro nijery an’izany no sady nangataka tamin-dRa-dadafara hoe
» Misy afo ato ry dadabe fa omeo rano aho hamonoako azy »
Taitra tamin’izany ny lehibe ka nijery, ary rehefa nahita fa tsy nisy azo atao intsony dia ny niteny an’ity zaza mba hidina sy hiala haingana ny toerana. Ary dia teo no farany nahitan’i Ra-dadafara an’i Babainina kely (Mika no tena anarany) Samy nikorapaka namonjy aina ka rehefa tany ivelany vao nahatsiaro ilay rangahibe fa tsy hitany intsony ilay zaza. Namoy fo sy efa saiky hanaotao foana ny anao lahy, ary niteny fa raha tsy hitany ilay zaza dia hanapitra ny androny koa izy. Notonena izy ary nilazako fa any ampitan’ny arabe any anie ka mbola feno ankizy sy olona marobe e. Any Mika fa aza tonga dia manary toky (izaho anefa amin’io tsy mbola nahafantatra mihitsy na maty na velona ilay zaza).
Tsy nety nino izy ary nandeha nitety ny sisin-dàlana rehetra nikaroka an’i Mika. Izay rehetra nanontaniany anefa dia samy tsy nisy nahita. Tsy nijanona teo koa aho fa lasa nanao ny fikarohako manokana. Ny zavatra vao mainka nampivarahontsana ahy indrindra dia ny nahenoako tamin’olona roa samihafa, tamin’ny toerana roa samihafa, fa hitan’izy ireo i Mika niverina niditra tany anatin’ilay trano niantso ny raibeny, ary izy nikiakiaka niantso « Dada » no farany henon’ireto olona ireto, izay tsy hafa fa olona mipetraka eo amin’ny manodidina ihany sy nanampy tamin’ny asa famonoana afo mandra-pahatongan’ny mpamono afo.
Manao izay tratry ny aina aloha mandra-paha...
Tapitra noteteziko sy nanonntaniako avokoa ny siisn-dàlana rehetra feno ireo olona nivorivory, na avy aty amin’ny Look’s aty ambany, na avy ary Andravoahangy ambony amin’iny vavahadin’ny AKFM iny, fa tsy nisy nahita an’i Mika intsony. Efa nanomboka ho kivy aho. Raha tamin’ny 6 ora sy 30 mn tany ho any mantsy ny afo no nanomboka, dia efa amin’ny 8 ora sy sasany kosa io fotoana nanombohako nivalaketraka io.
Nisy ankizilahikely nahalala ny fikarohako an’i Mika ka nanatona ary niteny fa lasa any amin’ny fianakaviany eo akaiky eo ihany i Mika fa tsy tavela ao anaty afo akory. Nentiny nijery maso azy aho ary dia indro tokoa i Mika miaraka amin’olona vitsivitsy, eo ambony tamboho iray, mitazana ny tanànany fahiny lanin’ny afo.
Hafaliana tsy nisy toy izany ny an’ilay rangahy efa teo amoron’ny famoizam-po raha nandre fa any i Mika, ary saika nanaotao foana izy hanapitra ny androny koa tamin’ity androany ity. Niandry fotsiny ny fiafaran’ny famonoana ny afo mantsy izy sisa hamantarany na tavela tao i Babainina na tsia, ka aorian’izay no saika handraisany fanapahan-kevitra saika namoa-doza.
Fa ny tany hono tsy ilaozan’adala. Mba nisy ihany ny fianakaviana afaka namoaka izay azo navoaka mba tsy ho levon’ny afo. Fa ny tsy valahara kosa mahita làlana foana hanimbinana ny kely sisa mba avotra. Ary raha mba izy ireny indray re no voa aoriana kely ao e? Amin’izay mety ho tsapany ny nahazo ny hafa tamin’io fotoana io.
Nilazana moa ny ankohonan’i Njaka kely fa raha tsy mahita haleha izy io alina io dia afaka mankany an-trano aloha miandry n y andro mazava mba hitadiavana vaha olana hafa indray, saingy toa hoe mbola tsy misy mahazo miala ry zareo fa miandry ny fanadihadiana ataon’ny polisy ho vita vao mahazo mandeha daholo
Fanampim-baovao : Hagagàna tanteraka ny ahy nony tonga taty an-trano fa nivadika ho toy ny resaka doro trano politika natao tamin’ny foiben’ny AKFM ny fanazavana nataon’ireo mpanao gazetin’ity Fahitalavitra tsy miankina iray ity TV Plus, izay marihako fa efa antsasak’adiny mahery taty aorian’ny nitrangan’ny loza vao tonga teny an-toerana. Izahay kosa minitra vitsy monja taorian’ny niaingan’ny afo no efa teny
17 novambra 2010: Ity indray dia resaka nataon’ingahy JAOZANDRY, sekretera janeralin’ny antoko avy amin’ny AKFM nilaza fa hoe heloka bevava no nandoroana ny biraon-dry zareo fa satria tokony hivory tao ry zareo androany amin’ny 9 ora maraina. Mba nanao fanadihadiana teny an-toerana ve io olona io ? Taty ambony amin’ny tohatra mankao amin’ny tananan’ny AKFM ihany no hitan-drangahy io, fa mbola averiko indray ny hoe tary amin’ireo trano hazo ambany , ambadiky ny mpivarotra MOTO sy tsy lavitra amin’ilay elakelantrano eo amin’ny OTIV no niainga ny afo. Fa tsy mety ve raha tsy anaovana récupération politika toy izany ny tranga toy ireny e? Raha mba afaka nivadika taty ambany angamba rangahy io dia tsy ho niteniteny foana tahaka izay.
Filed under: fiaraha-monina, tapatapany | Tagged: ambatomitsangana, andravoahangy, La Colombe, look's |
« Mikorapaka i Google Fitsapan-kevitra (REFERENDUM) 17 Novambra 2010 »
17 novembre 2010, jour de référendum vu par un citoyen lambda : Malag@sy Miray, on 17/11/2010 at 4:14 said:
[…] cette journée du 17 novembre 2010 commence sans fracs quand bien même quelques évènements inhabituels ont perturbé la veille. J’ai décidé de n’aller voter que dans l’après-midi. […]